Koorsooyinka AulaGEO - Geofumadas
Koorsada cilmiga dhulka
AulaGEO waa soo jeedin la dhisay sannadihii la soo dhaafay, oo bixisa koorsooyin tababar oo ballaaran oo la xiriira mowduucyo ay ka mid yihiin: Juqraafiga, Geomatics, Injineerinka, Dhismaha, Naqshadeynta iyo kuwa kale oo loogu talagalay aagga farshaxanka dijitaalka ah. Sannadkan, koorso aasaasi ah cilmiga geology dhiska ayaa furmay kaas oo ...
Hal-abuurnimo kastaa waxay lahayd kuwa raacsan oo markii la dalbado beddelay warshado kala duwan. Kombuyuutarka wuxuu bedelay habka aan ula dhaqano dukumiintiyada jireed, CAD wuxuu u diray miisaska sawirada bakhaarada; emaylka ayaa noqday habka asalka ah ee isgaarsiinta rasmiga ah. Dhammaantood waxay ku dhammaadeen iyagoo raacaya heerarka adduunka laga aqbalay, ugu yaraan tan iyo ...
Koorsooyinka - Hawlgalka BIM Koorsooyinka Fikradaha
Koorsada ArcGIS Pro - eber illaa heer sare iyo ArcPy
Ma rabtaa inaad barato sida loo isticmaalo qalabka ay bixiso ArcGIS Pro, laga bilaabo xoqida? Koorsadan waxaa ka mid ah aasaaska ArcGIS Pro; tafatirka xogta, qaababka xulashada astaamaha ku saleysan, abuurista aagagga danaha. Kadibna waxay kujirtaa digitizing, kudarista lakabyo, miisaska tafatirka iyo tiirarka sifooyinka. Waxaad sidoo kale baran doontaa sameynta astaamo ...
AulaGEO waxay soo bandhigeysaa koorsadan oo diiradda lagu saaray horumarinta iyo isdhexgalka xogta goobaha ee hirgelinta internetka. Tan awgeed, seddex qalab koodh bilaash ah ayaa loo isticmaali doonaa: PostgreSQL, maaraynta xogta. Soo dejiso, rakibid, qaabeynta qaab dhismeedka (PostGIS) iyo galinta xogta baaxadda leh. GeoServer, si loo qurxiyo xogta. Soo dejiso, rakibid, abuurista ...
Koorsooyinka - Geospatial
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 7
Koorsadan AulaGEO, waxay muujineysaa sida loo diyaariyo mashruuc guri oo dhab ah oo leh darbiyada dhismayaasha qaab dhismeedka, iyadoo la adeegsanayo qalabka xisaabinta qaab dhismeedka ugu awoodda badan suuqa. Barnaamijka ETABS 17.0.1. Wax kasta oo la xiriira xeerarka waxaa si faahfaahsan loogu sharaxay: Xeerarka Naqshadeynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Masoniga Dhismayaasha R-027. iyo kan…
Koorsada CSI ETABS - Naqshad Dhismeed - Koorso Takhasus ah
Kani waa koorso ka kooban horumarin teori iyo aragti wax ku ool ah oo ka mid ah Darbiyada Dhismayaasha Maskaxda. Wax kasta oo la xiriira xeerarka waxaa si faahfaahsan loogu sharxi doonaa: Shuruucda Naqshadeynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Masoniga Dhismayaasha R-027. Tani waxay sharxi doontaa ifafaalaha sida saamaynta safka gaaban, oo lagu dabaqo Masonry Walls iyo ...
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 5
Koorsadan waxaad awoodi doontaa inaad ku horumariso mashruuc guri oo dhab ah Structural Masonry Walls, adoo adeegsanaya aaladda ugu awoodda badan suuqa ee ku jirta barnaamijka xisaabinta qaabdhismeedka ETABS 17.0.1 Wax kasta oo la xiriira qawaaniinta waxaa lagu faahfaahiyay si faahfaahsan: Dhismayaasha Masonry Dhismayaasha R- 027. tan dambena waa ...
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 6
Koorsadan waxaad awoodi doontaa inaad ku diyaariso mashruuc guri oo dhab ah derbiyada dhismayaasha qaab dhismeedka, adoo adeegsanaya qalabka xisaabinta qaab dhismeedka ugu awoodda badan suuqa. ETABS 17.0.1 Software Wax kasta oo la xiriira xeerarka waxaa si faahfaahsan loogu sharaxay: Shuruucda Naqshadaynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Masoniga Dhismayaasha R-027. kan dambena waxaa lala barbar dhigi doonaa ...
Tusaha muuqashada (aragtida) QGIS
Sidee buu u shaqeeyaa Hillshade?
Jiilka Soo Socda Lidar: Kaynta Oo Geedaha Lagu Arko